SIYAABAHA LOO MARO JEERIGA: WAXA LAGA SAMAYN KARO JEERIGA JIILAALKA - CHERRY
Kirayga - Mid ka mid ah ugu caansan, dhadhan fiican oo faa'iido leh ee beerahayaga. Goynta xilliga qaboobaha ma sameyn karto iyagoon lahayn. Cuntooyinka badankood ee ilaalinta jeeriga ee xilliga jiilaalka waa kuwa qoyska oo la dhaxlo. Laakiin waxaa laga yaabaa inuu qof ogaado wax cusub ee diyaarinta jeeriga. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo kaydiyo jeeriga xilliga qaboobaha: keydinta oo dhan, "fitamiin", qalajinta, qalajinta, miraha candiedka ah. Iyo, dabcan, caanaha - casiir, compotes, xafidada, saxmad ah, macaanka.
Ma taqaanaa? Cherry Homeland - Mediterranean. Ruushka, geedka canabka ah ayaa la yaqaan tan iyo qarnigii 12aad isla markaana ku dhowaadey si dhakhso ah u heleen aqoonsi iyo bilaabay si ay u baxaan dhammaan jardiinooyinka.
Faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka miro cherry
Gorma waa lama huraan si kor loogu qaado waxqabadka iyo difaaca. Berry waa il heer sare ah oo fitamiino, macdan, asiidh organic, iyo fructose. Cellulose, tannins, inositol, coumarin, melatonin, pectin, anthocyanins ku dhex jira - caadiyan dheef-shiid kiimikaadka iyo shaqada habka dheef-shiidka, neerfaha, nidaamka wadnaha iyo habka muruqyada. Intaa waxaa dheer, saameyn togan oo ku saabsan xusuusta iyo maskaxda.
Qalabka waxtarka leh ee jeeriga ee daaweynta suuxdinta, sonkorowga, dhiig-yaraan, angina pectoris, hypertension, atherosclerosis, cudurka Alzheimers, arthritis, insomnia ayaa loo isticmaalaa. Iyo sidoo kale hargabka - sida antipyretic, expectorant, sedative. Waxay muddo dheer ahaan jirtay johannesiyada caanka ah - "dib u soo kabashada berry" ee ka hortagga gabowga iyo gacan ka geysashada dib u soo kabashada jidhka. Waxqabadka antioxidant iyo antimicrobial waa la xaqiijiyay.
Ma taqaanaa? Vitamins A, C, E, PP, H, koox fitamiin B, calcium, birta, copper, sulfur, molybdenum, manganese, chromium, fluorine, sodium, zinc, iodine, cobalt, boron, fosfooraska, rubidium, magnesium vanadium
Waxaa jira xoogaa xayiraad ah oo ku saabsan cunista jeeriga. Iyadoo taxadar leh waxay cunaan nooca berry oo leh astaamiyo sii kordhaya, boogaha caloosha, boogaha duodenal, gumaacad, gastroenteritis, cudurada daba dheeraadka ah ee xiidmaha iyo sanbabada. Guud ahaan, qiyaasta qiyaasta qiyaasta ee maalinlaha ah qof caafimaad leh waa 400-450 g oo ah nooca berry ah. Iyo haddii xili ay dhammaato, ka dibna miro la soo goostay.
Waa muhiim! Wixii diyaarinta kaydka waxaa loo isticmaalaa oo kaliya baaluq, si taxadar leh loo tiriyay, oo dhan, iyada oo aan lahayn calaamadaha cudurka berry.
Cuntada kala duwan ee jeeriga ee jiilaalka waa mid aad u caan ah.
Sida loo qalajiyo jeeriga
Qallajinta waa tan ugu cimilada badan ee lagu kaydiyo cherry for jiilaalka. Qalabaynta qorraxda qorraxda waxay qaadan doontaa ilaa 6-8 maalmood. Ururinta (waad maydhan kartaa, waad maydhan kartaa) berry ayaa ku faafaya dusha sare, heerkulku, sidaa daraadeed waxaa u dhexeeya iyaga u dhexeeyay masaafo gaaban. Awoodda leh johnta ayaa ku haray hooska qaybta ah ee waddada qorraxda kulul. Waqti ka waqti, berry waa in si taxadar leh u daalaan oo u jeestay. Ku qallajinta qalajiyaha korantada ama foornada.
Haddii aad leedahay qalab koronto oo khaas ah oo loogu talagalay nooca berry iyo miraha, markaa tilmaamaha waa in ay ku jiraan xuduudaha iyo habka diyaarinta badeecada kama dambaysta ah, kadibna raac tilmaamaha. Haddii ay ku qallajiyaan foornada, ka dibna dhaq oo u qalaji berry oo shukumaan. Xaashida dubista waxaa lagu daboolay xayawaanka, jeeriga ayaa lagu shubay hal lakab oo ku rid foornada. Laakiin albaabka foornadu si dhammaystiran uma xirna, waa inay noqoto mid khiyaano leh. Qalajinta heerkulka 1.5-2 saacadood ee hore waa 55-65 ° C, ka dibna 30-45 ° C
InWaqtiga karinta ayaa laga yaabaa inuu ka duwan yahay, sidaas darteed farta waxaa lagu cadaadin doonaa on berry ah: haddii casiir aan la sii daayay, ka dibna cherry diyaar u yahay. Waxay sidoo kale qallajiyaan jeeriga iyo godadka, kaliya ka hor qallajinta, siin waqti si ay u daadi casiir, ka dibna uumay berry leh barkin, shukumaan. Dhirta la dhammeeyey waxaa lagu keydiyaa maro ama bacaha warqadaha cabbirka yar ee heerkulka qolka. Ku keydinta geedka la qalajiyey laguma ogola qoyaanka sare - haddii kale miro ayaa kori doona caarye iyo xumaan.
Cunto-qoyan la qalajiyey
Diyaargarowga jiilaalka ee xilliga qaboobaha by qalajinta waxaa si guul leh loo isticmaalo by guriga hooyooyinka badan.
Habka 1. Lafaha waxaa laga saaraa berry oo la karkariyey jeeriga ee sharoobada - 1 litir oo biyo ah 700-800 g sonkor ah. Markaas berry ah ayaa la soo saaray oo gebi ahaanba loo ogolaadaa in la daadiyo sharoobada, ka dibna waxay sidoo kale ay ujoogaan boomaato. Ku qallaji foornada, armaajada heerkulka - 40-45 ° C ilaa diyaar. Rabitaanka waxaa lagu go'aamiyaa adoo riixaya berry - ma jirto qoyaan la'aan.
Habka 2 Gundhigyada la xirxiray waxaa lagu daboolay sonkorta - 1 kg - 500 g. Waxaa loo hayaa 24 saacadood oo casiir ahna la miiray. Miraha ku shub sharoobada la kariyey - 350 ml oo biyo ah halkii 350 g oo sonkor ah. Iskuday si qiyaas ah heerkulka 90-95 ° C oo kulul ilaa 4-5 daqiiqadood. Marka xigta, qaado jiirka iyo u ogolow in ay si buuxda u daadi. Kadibna la qalajiyey, sida habka ugu horreeya.
Waa muhiim! Gerriyada la qalajiyey oo la qalajiyey waa inay noqdaan kuwo adkeeynaya oo ay ku adkaato taabashada, laakiin aan lahayn meelaha qoyan ee ka soo baxa qoyaanka iyo ka samaynta cabitaanka.
Qodobbada lagu jimicsado jeeriga, sida loo badbaadiyo jeeriga jiilaalka
Haddii aad haysato qaboojiye weyn, xitaa ka sii fiican - waxaa jira qaboojiye, kadibna isticmaal siyaabaha loo xakameynayo jeeriga xilliga qaboobaha. Faa'iidada ugu weyn ee lagu keydsho waa amaan buuxa oo dhan dhammaan micro, macronutrients iyo fitamiino ee berry. Waxaad jiiri kartaa jiirta dad badan - waa, raaci oo ku rid weel caag ah, boorso, dhalo (oo dabool leh) kuna rid qaboojiyaha. Adiga ayaa si gooni ah u xakameyn kara berry kadibna u buuxi foomka loogu talagalay barafka. Si arrintan loo sameeyo, jeeriga la maydhay waxaa lagu dhajiyaa saxaarada waxayna ku ridaan barafeeyaha marka berry la barafeeyo, ku shub weelka, iwm - dhowr jeer oo soo noqnoqda.
Ma taqaanaa? Marka la qaboojiyey, berry ma wada jirayaan inta lagu jiro dhalaalista, ma jebiyaan oo waxay leeyihiin muuqaal ka sii qurux badan.
Haddii aad rabto inaad jimicsato jiirarka lafaha la gooyo, ka dibna qaado qashinka, ku rid weel oo ku shub qarkeeda juuska cherry. Si aad u diyaarisid casiirka jimicsiga geedka iyo sonkorta ee saamiga 1: 1. Sonkorta waxaa ka buuxsama berry, iyo casiirka la soo xulay waxaa lagu shubaa weel. Xitaa way sahlan tahay in la yareeyo "fitamiin" - cherry oo aan dhagax lagu qallajin ama lakabin leh blender oo lagu daray sonkorta 1: 1, ka buuxsamo weelasha - iyo qaboojiyaha. Berrya barafaysan waxay ku fiican yihiin dubista, buraashka, samaynta jellies, macmacaanada kale iyo, dabcan, isticmaalka cusub ka dib markii la jarayo.
Waa muhiim! Soo qaado weelka lagu keydiyo mugga loo baahan yahay - geedka mar hore la gooyey waa in isla markiiba loo isticmaalo. Laguma keydin oo dib loo dhigo!
Cuntooyin badan, waxaan ku siinaynaa oo keliya dhowr - waa kuwo sahlan.
Jelly - ee berry ah oo aan dhagxin ku darin biyo yar oo caadka ku celi daboolka 5-6 daqiiqo. Kadibna suuxdid cawska oo ku dar cabitaan miro ah (sida caadiga ah tufaaxa, way ka duwanaan kartaa) iyo sonkorta. Qiyaastii 1-2 kg ee berry ah waxaa ku jira 230-250 g oo casiir ah iyo 450-500 g sonkor. Karkari ilaa xoqan oo ku shub dhalooyinka.
Jam - giirta lagu maydho cirbadda oo cirbadda (skewer, caday) iyo ku shub sharoobada. Wixii sharoobada - biyo 200 ml iyo sonkorta 500 g halkii 1 kg ee berry. Tag 5-6 saacadood. Ka dib markii casiir la kala soocay oo la miiray iyo 450-500 g oo sonkor ah ayaa lagu shubay 200 g oo ah dareeraha oo si gooni gooni loogu kariyay 15 daqiiqo. Markaas jeeriga ayaa lagu shubay galay, waxaa lagu hayaa 4-5 saacadood kale, ka dibna la kariyey diyaargarowga oo lagu shaabadeeyey bangiyada.
Isku dar - sonkorta ayaa lagu daraa miro yar. Saameyntu waa 1 kg / 400 g.Waxaana lagu dhejiyaa dabka, walaaqaya si joogta ah, oo loo qoondeeyay 85-90 ° C, laguna hayo 5-7 daqiiqo, kadibna isla markaaba buuxsamo qasacadaha oo la duubay.
Cherry Goob leh sonkorta
Ama jeeriga jiiska leh sonkorta waa mid dhadhan fiican leh oo faa'iido leh, tan iyo sifooyinka faa'iido leh ee berry ku dhowaad lumay, gaar ahaan haddii aad isticmaasho suxuun aan dhoobo u karinta. Wixii shiidan, waxaad isticmaali kartaa Booqday Furimaha Dagaalka hilibka ama blender, iyada oo loo marayo shaandho - dhibaatooyin iyo dheer. Sonkorta cherry waa qashin degdeg ah. Berry oo aan dhagax dhagax ku dhicin oo jiifay sonkorta - 1: 2, si fiican u walaaq. Ka tag ilaa 1 saac si aad u faafiso. Markaas waxaa si fiican mar kale isku dhafan, la dhigay si sare ee barmiil jeermis dilay, laga bilaabo kor ku 0.5-5 tbsp. l sonkorta oo xir daboolka furarka. Ku kaydi qaboojiyaha, maqaasiinka, maqaasiinka.
Ma taqaanaa? Cinjir macaan leh oo macaan ah oo la jajabiyey ee jeeriga la jajabiyey waa daaweyn aad u fiican ee hargabka. Waxaa loo isticmaalaa isla markiiba laga soo qaato weel ama lagu daro shaaha iyo shaahyada dhirta.
Sida loo badbaadiyo cherry qaab ah miro candied ah
Cinjirka guriga la sameeyey ayaa si fudud loo sameeyey waxaana badanaa loo isticmaalaa cuntada sida halkii nacnac. Inkasta oo ay awoodaan, haddii loo baahdo, waxaa lagu daraa alaabta la dubay iyo wax ka bedelka. Cuntada aad u fudud. Jerrida Seedless 1.5 kg ku shubay sharoobada qaboojiyey of 100 ml oo biyo ah iyo 1 kg ee sonkorta. Si tartiib ah isku daraan si ay berry ah oo aan dillaacin, oo ku adkeyso 6-7 saacadood. Ka dibna waxay daadinayaan dhammaan cabitaannada soo baxday, ha u beerta si fiican u daadi oo ku qalaji foornada ilaa diyaar. Ku kaydi dhalooyinka, boorsooyinka caaga ah ama bacaha culus ee qolka madow, qabow, qallalan, tusaale ahaan, dabaqyada. Waxaa lagu kaydin karaa weelasha caagagga ee qaboojiyaha.
Hostes kastaa wuxuu dooranayaa waxa laga samayn karo jeeriga xilliga jiilaalka. Baqdintu way kala duwan tahay in ay fududahay in la doorto cunto karinta saxda ah. Oo waxaad u isticmaali kartaa hal mar dhowr siyaabood - ka dibna kala duwan oo cherry ka farxin doonaa guriga iyo marti ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha.